Nickel Boride Powder, Ni2B - Goodao Technology Co, Ltd.
Nickel bonde pakutanga yaishandiswa senzira yekukonzeresa kuita kwakasiyana siyana muahydrogen mhepo. Iyo yave ichishandiswa seyakaitika uye inogadziridza mune akawanda maitiro. Izvo zvakanakira nickel bonde zvinonyanya kuve zvakakwirira kuomarara, goodcatalytic athari, makemikari kugadzikana Uye yakanyanya kupisa kupisa, iyo mvura phasereaction ine kusarudzika kwakanaka uye kugadzirisazve, inogona kunge isiri-yakakosha simbi hydrogenelectrode catalyst, mafuta sero electrode electrode catalyst.
Molecular fomula NI2B
CAS Nhamba 12619-90-8
Unhu pfumbu nhema
Kuwandisa 7.39 g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka 1020 C
Zvishandiso Nickel bonde pakutanga yaishandiswa senzira yekukonzeresa kupindirana kwemhepo muahydrogen mhepo. Iyo yave ichishandiswa seyakaitika uye inogadziridza mune akawanda maitiro. Izvo zvakanakira nickel bonde zvinonyanya kuve zvakakwirira kuomarara, goodcatalytic athari, makemikari kugadzikana Uye yakakwira kupisa kwemafuta, mune yemvura phasereaction ine kusarudzika kwakanaka uye kugadzirisazve, inogona kunge isiri-yakakosha simbi hydrogenelectrode catalyst, mafuta sero electrode electrode catalyst.
Kemikari fomula Ni2B
Iyo molecular kurema kwe69.52
Nzvimbo yakanyunguduka ndeye 1020 ℃
Kuwanda kwehukama 7.3918
Yakanyanya magineti. Inonyungudika mu aqua regia uye nitric acid. Kunyangwe yakagadzikana mumhepo yakaoma, inobata nekukurumidza mumhepo ine hunyoro, kunyanya pamberi pe CO2. Inoita neklorini gasi panguva yekupisa. Kana yatsva nemhute yemvura, nickel oxide uye boric acid inogona kuumbwa.
Pashure: Magnesium Boride Upfu, MgB2
Zvadaro: Hafnium Boride Upfu, HfB2
Nickel boride upfu
Nickel boride upfu Mafekitori
Nickel boride upfu Fekitori
Nickel boride upfu Mugadziri
Nickel boride poda Vagadziri
Nickel boride upfu Mutengo